Mahajanga: foibe « cyber école » voalohany | NewsMada
Mahajanga: foibe « cyber école » voalohany
Notokanana ny 30 jolay teo tao amin’ny Foibe fanofanana asa (CFPF) Mangarivotra ny sampana « cyber école » voalohany any amin’ny faritra Boeny. Tanteraka izany vokatry ny fiaraha-miasan’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy ny fampiofanana asa, ny Unesco ary ny orinasa Telma.
Manofana ny tanora hiasa amin’ny lafiny informatika (micro opérateur Tic, gestionnaire de multiservice Tic, sns) ity foibe ity. Tafiditra ao anatin’ny Politikam-pirenena ho an’ny asa sy ny fanofanana asa ity tetikasa ity. Mamaly ny filana ara-toekarena sy ara-tsosialy any an-toerana, sady manova ny paikady amin’ny fitantanana ny foibe fanofanana amin’ny lafiny fahaleovantena amin’ny vola sy ny fitantanana. Voakasiky ny tetikasa ny mpianatry ny lisea sy ny tanora hitady asa, mampiakatra ny lanjan’ny fahaizan’izy ireo amin’ny lafiny Tic.
“Informatika ho an’ny rehetra”
Nanome ordinatera miisa enina, hampandehanana ny internety ny Telma, hampandehanana ity foibe ity, ao anatin’ilay fandaharanasa “informatika ho an’ny rehetra”.
Efa nisy tetikasa roa hafa toy izao koa any Tsironamomandidy, ny taona 2019, sy ny any Nosy Be, ny taona 2018. Tanjona ny hanapariahana azy manerana ny faritra 23. Nilaza Ratovoson Michael, talen’ny maha olona Telma, fa miisa 70 ny foibe tafapetraka ao anatin’ny “informatika ho an’ny rehetra”, miisa 80 000 ny mpahazo tombontsoa, 120 ny mpampiofana ary 270 ny ordinatera nozaraina.